Inona no fanavaozana malaza indrindra tamin'ny 2021? | Bezzia
Inona no fanavaozana malaza indrindra tamin'ny 2021?
Bezzia | | beauty
Ny fiovan'ny lamaody dia cyclical ary misy fiantraikany amin'ny lafiny estetika rehetra amin'ny olona iray, manomboka amin'ny modely farany amin'ny sneakers izay mametraka fironana amin'ny endrika mampiavaka ny volo. Amin'izay heviny izay, manasongadina izy ireo ny updos tsara indrindra ho an'ny antsasaky ny manes ho iray amin'ireo fironana amin'ity taona 2021 ity. Ny karazany dia ny tsirony ary ny marina dia ny zava-baovao amin'ity taona ity amin'io lafiny io, mety ho vokatry ny filàna ny filazana fa tsapan'ny vehivavy maro taorian'ny fe-potoana voafetra. Ireto ny fanangonana malaza indrindra amin'ny taona.
Nanjary nalaza ny fomba fanao mahazatra, indrindra any amin'ny tanàna lehibe. Loose hidin-trano, curls ary ny fahatsapana ho disheveled, na dia hevitra miaraka amin'ny tohan-kevitra. Ny tombony amin'ity modely fanangonana ity dia ny fampifanarahana amin'ny vanim-potoana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro. Miova ny fironana ary tsy mahagaga ny mahita tovovavy iray ao amin'ny disco miaraka amin'ity taovolo ity. Izy io dia miavaka amin'ny fanamorana ny famoronana sy amin'ny fomba fiaina izay mandeha haingana sy haingana kokoa, ity dia tombony. Adiny iray handrakofana ny voloko? Mety ho fampakaram-bady, fa tsy hosotroina anio alina miaraka amin'ny namako.
Raha anisan’ireo mitsinjo ny fanangonan’izy ireo ianao, na tsotra toy inona aza izany, aza manahy fa manana toerana amin’ny lamaody amin’ity taona ity koa ianao. Taovolo ara-dalàna kokoa izy io, na dia tsotra aza; misy volo mahitsy sy tsipìka ao aoriana. Mihamitombo hatrany izany amin'ny fety lehibe satria fantatsika rehetra fa aorian'ny fisotroana roa dia tonga ny fotoana hanalefahana ary ny zavatra farany tadiavintsika dia ny ho lasa manelingelina ny volo amin'izao fotoana izao.
1 Fotoan'ny randrana
2 Tsipìka tsotra, nahoana?
Nisy fotoana, tsy ela izay, izay ny volo nangonina tamin`ny randrana no fironana eo amin`ny malaza any Hollywood, hevitra niparitaka tamin'ny sehatra sy sehatra tany amin'ny firenena maro. Nahita an'i Blake Lively, Kim Kardashian, Shakira, Pilar Rubio ary Queen Leticia mihitsy izahay. Ny fahatsorana sy ny hakantony mba hahazoana famoriam-bola naverina tamin'ny taona 2021. Mba hanomezana azy manokana sy hahazoana vokatra tsara kokoa, dia tsy maintsy mampiasa famenon'ny volo ianao. Azonao atao ny misafidy fomba milamina na fomba iray mikorontana kokoa, izay tsy manakana ny vokatra mahavariana.
Ny randrana koa dia mety ho frantsay na fomba fakany, izany hoe manangona volo hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany. Tsotra kokoa ny vokatra, na dia mitazona ny hakantony aza izy ary mety amin'ny andro mahazatra na fety.
Tsipìka tsotra, nahoana?
Tsy very mihitsy ny ballerina bun. Na dia mahazatra aza ny hatsaran-tarehy, ny Topknot fanta-daza no mpilalao fototra tamin'ny gala Oscars mihoatra ny iray. Ireo mpilalao sarimihetsika toa an'i Olivia Munn, Rachel McAdams na Jennifer Garner dia nametraka fironana izay nitohy hatramin'izao.. Izany dia fomba tanora izay afaka manambady kanto, ka miasa amin'ny fotoana rehetra. Haingana sy mora ny dingana; ary aza adino ny sôkôla. Izy ireo dia hiasa amin'ny fitazonana ny volo rehefa avy manao rambony eo an-tampon-doha. Ahoana raha manana volo olioly ianao? Toy ny any Updos ho an'ny volo olioly izay mijery tsara ary izay ahafahan'ny manes mitana anjara toerana lehibe.
Afaka misafidy izay mitady bun mihaja sy original ambony ambony, izay hita be ihany koa nandritra ny taona. Izy io dia safidy kanto kokoa ary mahazatra amin'ny hetsika lehibe. Ho fanampin'izany dia hahazo laza ianao amin'ny tendany sy ny tarehy satria amin'ity karazana fanangonana ity dia zara raha manarona ireo faritra ireo ny volo. Ny bun avo sy ny volo dia mety mahitsy sy milamina na asiana endrika anarchic kokoa. Ny zava-dehibe dia ny mahazo aina amin'ny tenanao. Eo amin'ny ilany iray dia misy tsipìka ambany dia ambany, izay saika tazonina eo amin'ny tendany. Fomba tsy mifanaraka amin'izany izay ahazoan'ny randrana indray ny lazany. Izy io dia mifanaraka amin'ny tsiro tsy ara-potoana sy mahazatra, izay ekena tsara ho an'ny andro isan'andro.
Misy izany taovolo hafa izay efa fironana ary eo amin'izy ireo dia misongadina ny fihodinana. Mitaky fotoana bebe kokoa hiomanana noho ny modely hafa izany, saingy tsy misakana ny vehivavy maro tsy ho sahy izany. Ny vokatra dia endrika hafa sy tany am-boalohany, miaraka amin'ny tsipìka ao ambadika.. Hevitra izay hita hatrany eny an-dalambe ary mitondra ny maha-izy azy. Manolotra fahafaha-manao maro amin'ny haben'ny updo izy io, satria misy ny vehivavy misafidy ny hametahana ny volony, ka zara raha ankasitrahana ny bun; sy ny hafa izay mikatsaka ny hamaroan'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Inona no fanavaozana malaza indrindra tamin'ny 2021?
Vitroceramic na induction hob, iza no fidiko ho an'ny lakoziako?
Thermotherapy amin'ny physiotherapy